ANYỊ NA-AJỤ - Malite Ntuziaka New ESTA. Nhazi oge 72
ỤLỌ NCHEBỤ BỤ ỤBỤTA VISA ECHICHE
Kedu ụdị ozi dị mkpa iji mezue ngwa ESTA?
Ị ga-enwe ihe niile dị n'okpuru ebe a dị njikere mgbe ịmalite ngwa ESTA:
Aha zuru oke na ụbọchị ọmụmụ
Ozi paspọtụ (nọmba paspọtụ, mba nke mbipụta, ụbọchị mmebi)
Ozi kaadị akwụmụgwọ (nọmba kaadị, ụbọchị ịkwụsị, CVV)
Ọ dị mkpa mgbe ọ bụla m ga-etinye akwụkwọ maka ikike njem?
Ị nwere ike ịchọta itinye akwụkwọ ọhụrụ ma ọ bụrụ na nke ọ bụla bụ eziokwu na ọnọdụ gị:
Paspọtụ m anwụwo, na enwetara m paspọtụ ọhụrụ
Agbanweela m aha iwu m
Agbanweela m nwoke na nwanyi
Emeela m ka m bụrụ onye amaala
Ọnọdụ ndụ m agbanweela n'ụzọ ga-eme ka ọ bụla nke mbụ izizi 'ee' ma ọ bụ 'enweghị' na ajụjụ ESTA agaghịzi adị
Ikike NST gị gara aga na-agwụ, ma ọ bụ n'ihi na paspọtụ gị anwụọla ma ọ bụ n'ihi na afọ abụọ agafeela kemgbe e nyere ikike gị ikike
Kedu ihe ikike njem maka United States?
United States mepụtara usoro ikike njem njem kọmputa maka Visa Waiver Program (VWP). Usoro ESTA na-eme ka njem nlezianya na-enweghị nchebe na-enye ohere ka mba nke mba ndị na-esonye na VWP iji nweta ikikere njem ha na ntanetị.
Ònye nwere ike itinye akwụkwọ maka ESTA?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ileta United States dịka akụkụ nke VWP site na ikuku ma ọ bụ n'oké osimiri, ịnwere ike itinye maka ikike njem. Ndị njem niile na-enweghị akwụkwọ visa (ụmụ ọhụrụ) ga-enweta ikikere tupu ha agaa United States. Ị nwere ike itinye akwụkwọ site n'iji ndị ọzọ mee ihe maka onye ọ bụla njem iji nweta ESTA.
ESTA ikike abụghị visa. Ọ bụ tupu ịkwụsị njem n'okpuru VWP, nke e mere iji kwe ka ndị njem na-agafe usoro nlezianya oge. Ikike ESTA adịghị ka visa United States n'ụzọ ọ bụla, ọ nweghịkwa ike dochie anya visa na ọnọdụ ebe a chọrọ visa maka njem. Ịchọghị ESTA ma ọ bụrụ na ịnwere visa ziri ezi.
Enwere m ike itinye maka ESTA n'enweghị ohere ịntanetị?
ESTA bụ usoro ntanetị, na ịntanetị dị mkpa. Otú ọ dị, ndị njem na-enweghị ohere Ịntanetị nwere ike ịme ndị ọzọ (onye na-elekọta ọrụ, onye ọrụ njem, onye ikwu, ma ọ bụ enyi) iji nyefee ha akwụkwọ ESTA maka ha. N'agbanyeghị ikpe ahụ, ị ​​ka bụ onye na-ahụ maka iwu maka azịza ọ bụla edobere maka gị
Kedu ihe usoro ESTA iji nweta ikike njem njem US?
Nzọụkwụ 1 bụ iji mezue ngwa ESTA.
Gaa na weebụsaịtị ESTA ma mejupụta ngwa a nyere ozi achọrọ: Ndepụta dị n'elu nakwa yana nhazi njem gị ugbu a, ozi kaadị akwụmụgwọ gị, na ajụjụ nchedo niile. A ghaghị edozi akwụkwọ maka ndị niile so n'òtù gị ndị na-enweghị visa. Nke a gụnyere umuaka.
Mee ugwo maka ugwo ngwa ahia ESTA.
Mee ugwo maka itinye n'ọrụ nyocha na nhazi nke $ 89.00 USD. The na-eri na-agụnye iwu amanyere bụ iwu US ego ego nke $ 4.00 USD nhazi ego (nke a na-akọwapụta na Iwu Nkwado Njem, 2009), na $ 10.00 USD ma ọ bụrụ na ngwa gị gafere nke ọma ma kwadoro ya.
Nata ESTA gị site na e-mail.
Ị ga-enwetakarị ikike njem njem ESTA n'ime awa ole na ole. Otú ọ dị, nyochaghachi, na nhazi ngwa nwere ike iwe ogologo. N'okwu a, ị nwere ike ịtụ anya na ị ga-ezigara gị ikike ị ga-ezigara gị n'ime ma ọ dịkarịa ala 72 awa.
Ị nwere ike ịnweta otu n'ime atọ statuses ngwa ngwa:
Kwadoro. Usoro a ga-enye PDF akwụkwọ nwere ike ịnweta ederede nke nkwado gị na nnata maka akwụkwọ ndekọ ego ịkwụ ụgwọ gị, a kwenyekwara gị ịga njem n'okpuru Visa Waiver Program. Otú ọ dị, ikike ESTA ekwenyeghi na ịbanye na US. Onye uweojii na ndị na-ahụ maka ọdịda na-echedo gị tupu ịbanye na US, onye ga-ekpebi ịkwesịrị ịbanye United States.
Enweghị ikike. Na nke a, enyeghị gị ikike iji Visa Waiver Programme mee njem na United States. Nke a abụghị ịjụ ịbanye na United States, ma ọ bụ na ị gaghị aga njem na US, mana naanị na ị gaghị erubere Visa Waiver Program. Ị nwere ike ịga na Ụlọ Ọrụ Embaseti US iji kwurịta otu esi nweta visa.
rue mgbe. Ọ bụrụ na ọnọdụ gị bụ "Na-echere", ọ pụtara na mkpebi mmechi ahụ enweghị ike ịme site n'usoro usoro ahụ, ma ikike njem gị dị n'okpuru nyochaa ọzọ. N'okwu a, ị ga-enweta ozi dị mkpa iji chọpụta ọnọdụ ngwa gị mgbe awa 72 gasịrị.
Ị ga-eweta akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke ikike njem m na ọdụ ụgbọ elu?
Achọghị ka ị wetara akwụkwọ akụkọ nke ọnọdụ gị ESTA na njem gị. DHS ga-enwe ndekọ kọmputa nke ikike gị. Otú ọ dị, a na-atụ aro na ị nwere mbipute gị dịnụ ma ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla kwesịrị ibilite n'oge njem gị.